Madaxweynaha Somaliland oo Mdaxtooyada ku qaabilay madaxa shirkada DP world +... - Wararka Maanta
Hargeysa,(Wararka Maanta) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxa shirkada DPworld Sultan Axmed bin Suleyman oo kulan qaatay, ayaa ka wada hadlay wajiga labaad ee dhismaha dekedda Berbera iyo Berbera corridor
Warsaxafadeed kasoo baxday kulanka ayaa lagu sheegay in labada masuul ay kawada hadleen furitaanka wajiga koowaad ee dhismaha dekedda Berbera iyo bilaabitaanka dhismaha wajiga labaad ee dekedda.
Sida warsaxafadeedka lagu sheegay kulanka ayaa waxa kale oo lagaga wada hadlay imkaaniyaadka ganacsi ee ku dagaman isticmaalka dekedda, marin ganacsiyeedka Berbera corridor iyo baladhinteeda madama oo ay mari doonaan shixnado aad ubadan.
Wararka Maanta : Xog: Farmaajo iyo Rooble, Cali Guudlaawe iyo Qoor Qoor oo sii kala fogaanaya -...
Warsaxafadeedka ayaa intaa ku dartay in laga wada hadlay casriyaynta kastamada magaalooyinka Tog-wajaale iyo Berbera si shixnadaha iskaga kala gooshaya dekedda Berbera iyo waddamada geeska Afrika ay u noqdaan qaar xawli ku socda.
Kulanka madaxweynaha iyo madaxa DPworld ayaa ku dhamaday is afgarad buuxa oo ay labada dhinac ka yeesheen hawlaha laysla lafa-guray sida warmurtiyeeka lagu sheegay.
Marka ay dhamaato balaadhinta dekedda Berbera, ayaa la rajaynayaa in ay horseedo qul-qul shixnado ganacsi oo dhexmara Somaliland, Itoobiya iyo waddamo kale oo geeska Afrika ah.
Wararka Maanta : Deg Deg: Md Farmaajo oo Siyaasad Cusub lasoo baxay, Taageerada Carabta & Hubka UAE...
Wararka Maanta : Safiirkii Mareykanka: "Farmaajo ma rabo inay doorasho dhacdo, waa in tallaabo adag laga qaado" -...
Wararka Maanta : Raysal Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo...
Wararka Videos4 mins ago
Warka Ciyaaraha15 mins ago
Warka Caalamka59 mins ago